Tilmaam dhammaystiran oo ku saabsan fahamka sida loo isticmaalo Binance - Cazoo
Tilmaam dhammaystiran oo ku saabsan fahamka sida loo isticmaalo Binance
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Tilmaam dhammaystiran oo ku saabsan fahamka sida loo isticmaalo Binance
Tag: Binance, Ganacsiga Crypto, Exchange, Launchpad, Daahfurka, Xaddid amar, Amarka Suuqa
Waqtiga akhriska: 16 minuti
Ma waxaad isku dayeysaa inaad suulashaada ku dhex dhex gasho sawirka markii ugu horeysay ama aad heshay midkaas halyeeyga ah subkan oo ma u baahan tahay inaad marto Coinbase si aad u hesho? Haddii tan oo kale ay kugu soo martay, waxaa laga yaabaa inaad raadineysid Isweydaarsi ku siinaya inaad gasho boqolaal subkan iyo lamaanaha ganacsiga. Isweydaarsi ku siinaya ikhtiyaarro badan oo aad ku dhigato doollar, rodol, yuuro ... laga yaabee, oo laga yaabee, laga yaabee inaad sidoo kale xiisayso inaad haysato suurtogalnimada inaad ka ganacsato Futures si aad uga kasbato dulsaar cryptocurrency. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa rabto inaad mid hesho kaarka Visa Visa. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka qayb gasho mid ka mid ah kuwaas qarsoodi ah IEOs (Bixinta Isdhaafsiga Bilowga ah) ee qof kuu sheegay .. inaad meel ka aqriso .. war wanaagsan qof walba! Waxaa jira isweydaarsigan “Phantom Exchange” oo bixiya waxaas oo dhan iyo wax badan. Xaqiiqdii, waa isweydaarsiga lambarka koowaad ee adduunka: Binance.
Waxaan u qorayaa hage rasmi ah oo loogu talagalay bilowga isticmaalka Binance. Talaabo talaabo, sida loogu iibsado Bitcoin lacagta fiatka ee caadiga ah, waxaan arki doonaa sida looga ganacsado isweydaarsiga oo waxaan ku siin doonaa aragti guud oo ku saabsan astaamaha kale ee waaweyn ee Binance. Waxaan sidoo kale eegi doonaa sida loo helo qiimo dhimis 40% khidmadda ganacsiga ah si aad ugu keydiso inta badan kuwa faa'iidada u leh macaamiisha jeebkaaga sida ugu macquulsan.
Ma ku cusub tahay halkan? Soo dhawow!
Halkan cazoo hadafkeygu waa inaan ku xafido, anigoo qoraya, macluumaadka aan ka soo ururiyo maalin kasta khadka tooska ah, maxaa yeelay tani marwalba waxay ahayd qaabkeyga waxbarasho. Haddaan qoro, waan xasuustaa. Intii aan hadalka ku qaban lahaa, halkan ayaan ku sameeyaa, markaa waxaan qof kale kaga caawin karaa qoraalladayda. Waan kula hadli doonaa adiga oo naftayda la hadlaya, sida inay ahayd xusuus qor.
Sida qof kastaa dhaho anigu ma ahi lataliyayaasha dhaqaalaha waxaa laga yaabaa inay mudan tahay inaad dabadaada daboolto, ka dibna waxaan dhihi doonaa sidoo kale: Ma ihi lataliye dhaqaale, Kuu sheegi maayo sida lacagtaada loo maal galiyo waligeyna isma ogolaanayo.
Diyaar ma u tahay inaad wax walba ka barato Binance? FIG.
Waa kuma Binance?
Binance miyuu daboolayaa dhammaan crypto xiisaha aniga?
Ku shubista Crypto ee Binance
Sida loo badbaadiyo guddiyada
Xayeysiisyada ku saabsan Binance Home Page
Sidee looga ganacsadaa Binance?
Adeegyada kale ee la bixiyo?
Aynu qaadanno aragti guud oo ku saabsan Binance shirkad ahaan? Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay inay tahay fikrad wanaagsan inaad ogaato cidda aad la macaamilayso ka hor intaadan lacag dhigin barxadooda.
Qodobka ugu horreeya ee ka soo horjeedda: cidina dhab ahaantii ma oga halka Binance ay ku taal xaruntiisa. Inbadan waxay dhahaan Malta, sikastaba sanad kahor jaangooyaha Malta wuxuu shaqsi ahaan ugujawaabay in Binance uusan hoos imaanin xukunka Malta. Sikastaba, runtii waa dhibaato? Ma xiiseyneysaa inaad ogaato halka Bitcoin ku saleysan tahay? Kuwani waa shirkadaha loo yaqaan 'cryptocurrency'. Waxaa laga yaabaa inay fiicantahay inaadan u xukumin sida aad ugu xukumi lahayd shirkad dhaqameed. Si kastaba ha noqotee, Binance waa mid caalami ah waxayna xafiisyo shaqaale ku leedahay adduunka oo dhan ku dhowaad 50 dal.
Wiilasha Binance miyay qarsanayaan sidoo kale? Waxaan dhihi lahaa maya: iyaga waxaa ka mid ah halyeeygii aasaasay iyo saaxirkii maaliyadda Changpeng Zhao, oo ku magac dheer CZ, oo ka qeyb qaata wareysiyo badan, ayaa badanaa wax ku qoraa Twitter oo xitaa hal maalin ayaa ka muuqata jaldiga majaladda Forbes. Sida laga soo xigtay joornaalkan, CZ waa qofka shanaad ee ugu qanisan cryptocurrency oo leh hanti qiimaheeda lagu qiyaasay $ 1,9 bilyan oo doolar.
Changpeng Zhao oo ku yaal daboolka Forbes
Waxaa la bilaabay 2017, ka dib guul ICO oo kor u kacday $ 15 milyan taas oo maalgashadayaashu ay ku heleen calaamadaha BNB isweydaarsiga, qiimaha bilowga ah ee kudhowaad 10 senti. Maanta BNB waxay dul heehaabeysaa $ 250 .. maaha soo celin xun oo maalgashiga kuwa aaminay CZ bilowgii. Sannadkii 2019, Binance wuxuu kasbaday ku dhowaad $ 570 milyan oo macaash ah, dhammaadka sannadka 2020-ka Is-weydaarsiga kaligiis wuxuu lahaa qiyaastii $ 1 bilyan oo macaash ah. Sidoo kale 2020 Binance ayaa leh iibsaday kaar-bixiyaha kaararka sirta ah Jiid, mashruuc ku kacaya qiyaastii $ 200 milyan. Waxay sidoo kale dhawaan heshay $marketmarketcap.com $ 400 milyan. Maalgashiyo kale oo istiraatiiji ah waxaa ka mid ah FTX Exchange, oo calaamadiisu tahay mid ka mid ah 40ka cryptocurrencies ee ugu sareeya qiimena u leeyahay ku dhowaad 2 bilyan oo xaraarad suuq ah.
Midkan aan hadda soo taxay maahan liis dhammaystiran oo ku saabsan wax kasta oo Binance uu si istiraatiiji ah u maal-galiyay, laakiin waxaan u maleynayaa inaad fahantay in Binance Exchange uusan dhab ahaan ahayn mashruuc laga wado meel dhulka hoostiisa ah. Maya, waa kan ugu guuleysiga badan ee loo yaqaan 'Crypto Exchange' meeraha, oo uu hogaaminayo aasaasihii ku guuleystay seddex sano iyo badh waxa qaadan lahaa inta badan bilyaneerada inta uu nool yahay, iyo wixii intaa ka sii badan, Binance ma laha qorshayaal uu ku gaabinayo ballaarintiisa. hadday ujeedadoodu xumaan lahayd ... wax badan baa lumi lahaa.
Binance sidoo kale wuxuu hayaa rikoodh la xaqiijiyay oo ah inuu sameeyo waxa saxda ah - waxaa laga yaabaa inaad horeyba u ogayd in la jabsaday sanadka 2019, halkaas oo qiyaastii 2% ka mid ah hantidii Bitcoin ee Isweydaarsiga luntay. Si kastaba ha noqotee, Binance waxay si buuxda u magdhowday dhammaan kuwa ay waxyeeleeyeen jabsashadaas lacag ka soo qaadashada sanduuqa SAFU (Lacagta Hantida Sugan ee Isticmaalayaasha) taas oo ah dusha sare ee cryptocurrency loo qoondeeyay si loo daboolo waxyaabaha sida hacks.
Waxaan dhihi lahaa waxaan helnay aragti fiican. Aynu horay u sii socono, oo aan aragno sida loo ogaado haddii altcoin aad aad rabto aad dhab ahaantii ku qoran tahay Isweydaarsiga. Ka dib oo dhan, waa maxay ujeedka sameynta koonto haddii waxa aad raadineyso aysan jirin. Hadda waxaan kuu sheegayaa xeelad aad ku fahmi karto taas oo Isweydaarsiga wixii cryptocurrency ah lagu ganacsado.
Si tan loo sameeyo waxaad aadi kartaa coinmarketcap.com, guji raadinta oo ku qor koodhka aad xiisaynayso. Xaaladdan oo kale waxaan u adeegsaday daanyeer. Markaad gujiso Duufaanta waxaad arki doontaa bogga tirakoobka oo leh taxane taxane ah iyo jaantus qiime leh. Haddii aad eegto korka jaantuska qiimaha waxaad arki doontaa farabadan xulashooyin kala duwan oo midkood noqon doono badhanka suuqa. Dhagsii wiilkaas yar waxaadna durba arki doontaa dhammaan isweydaarsiyada kaladuwan ee Avalanche ay kuqorantahay oo ay weheliso lammaanaha isdhaafsiga ee kaladuwan ee la heli karo.
Aan aragno: AVAX waxaa laga iibsan karaa Binance oo leh astaamaha USDT, BTC, EUR, BUSD iyo BNB. Sidoo kale maskaxda ku hay in Binance guud ahaan uu leeyahay mugga ganacsiga ugu badan ee ku dhowaad dhammaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', sidaas darteed inta badan dadka ka ganacsada lacagta laga hadlayo waxay ku sameeyaan Binance. Si kastaba ha noqotee, waad ku celin kartaa habkaas wixii cryptocurrency ah si aad u ogaato halka laga iibsanayo.
Ku biiritaanka Binance runtii waa wax fudud, ma jirto wax qoraal ah oo talaabo talaabo talaabo ah oo ah waxa la sameynayo, waxaan ku kalsoonahay inaad isticmaali doonto eray sir ah oo runtii adag in la qiyaaso, oo hubi inaad dajisay laba qodob oo aqoonsi ah adoo adeegsanaya Google Authenticator. Nabadgelyadu weligeed ma badna!
Hadda waxaan dhigeynaa lacag fiat ah, yacni yuuro ama doolar, Binance.
Dusha kore waxaa ku yaal badhanka Buy Crypto, iibso cryptocurrency. Ka dib markaad gujiso waxaad arki doontaa liiska dhammaan lacagaha fiatka kala duwan. Waxa run ahaantii qabow ee ku saabsan Binance ayaa ah in qaar ka mid ah hababka deebaajigaani ay yihiin kuwo aan komishan lahayn, markaa asal ahaan waxaad helaysaa inta ugu badan lacagtaada. Yurub oo dhan wareejinta bangiga, sidaas darteed dhigaalka SEPA, waa a guddiyo eber , halka haddii aad doorbideyso inaad isticmaasho kaarkaaga deynta si aad ugu sameyso dhigaalkaas Binance Visa iyo Mastercard labadaba, waxaa lagaa qaadayaa 1,8% halkii euro. Ma doonayo inaan bixiyo guddiyo. Kaliya ka taxaddar hal shay markaad isticmaaleyso wareejinta bangiga: waa inaad isla isticmaashaa lambarka tixraaca lacag bixinta, lambarka tixraaca lacag bixinta, oo aad ku aragto Binance. Qaabkan Binance wuu ogyahay inay tahay tuo dhigaalka iyo kaas oo loo qoondeyn doono tuo koontada Marka deebaajigaaga la farsameeyo oo aad heysato xoogaa yuuro ah xisaabtaada Binance, waxaad dib ugu laaban kartaa iibsiga Crypto tab oo waxaad ka dooran kartaa Isku-dheelitirnaanta Lacagta ee ka timaadda liiska hoos ku qoran.
Bogga soo socda waxaad ku geli kartaa sida iyo nooca cryptocurrency ee aad rabto inaad iibsato. Binance sidoo kale wuxuu ku tusayaa inta cryptocurrency ee aad heli doonto .. asal ahaan intaas oo dhan ayaa ku jirta.
Kawaran hadaad horeyba laheyd xoogaa cryptocurrency oo aad rabto inaad kubiirto bucshiradda 'altcoin' ee sarifka?
Si aad ugu shubato koontadaada, gal koontadaada oo dhagsii badhanka boorsada ee midigta kore ee shaashadda. Tani waxay ballaarin doontaa menu-ka hoos-u-dhaca ah waxaanan xiiseyneynaa sheyga Fiat iyo Bar. Halkaas gal. Waxaa lagaa qaadi doonaa shaashadan:
Kadib dhagsii badhanka deposit, iyo bogga ugu horreeya ee soo bixi doona wuxuu noqon doonaa bogga dhigaalka ee Bitcoin oo leh cinwaanka BTC. Haddii aad rabto inaad dhigato BTC taasi waa cinwaanka aad u isticmaali karto inaad Bitcoin ugu dirto Binance. Si kastaba ha noqotee haddii aad leedahay subkan waxaad dooneysaa inaad dhigato bedelkeeda waxaad si fudud u riixi kartaa badhanka Bitcoin si aad u ballaariso menu-ka hoos u dhaca oo aad u raadsato crypto aad xiiseyneyso. Halkan tusaale ahaan waxaan ku doortay Cardano.
Waxaan dhahnay inay jiraan guddiyo ganacsiga: hadda waxaan sharxi doonaa sida loo bixiyo wax yar. Waxaan sidoo kale hayaa talooyin ku saabsan halka aad ka heli karto Xayeysiinta Binance, qaarna lama seegi karo.
Guddiyadu waxay umuuqdaan inay yihiin wax rasmi ah, laakiin marwalba waa in lagu daro .. oo markay wax badan noqdaan mustaqbalka fog waa la maqli doonaa, ee si taxaddar leh u dhageyso.
Ugu horreyntii: waxaa jira laba nooc oo ah khidmadaha ganacsiga ee loo yaqaan 'cryptocurrency currency', tan hore ayaa ah Tkhidmadda kaas oo khuseeya markaad amar ku bixinayso qiimaha suuqa ee hadda jira. Ta labaad ayaa ah Khidmadda Calaamadaha, oo aad bixineyso markaad bixiso xisaabinta adoo galaya waxyaabo sida "amar xaddidan". Waan hubaa in Khidmadaha Taker la bixin doono hawlgallada aad rabto inaad qabato, markaa aan xoogga saarno kuwan.
Khidmadaha Taker iyo Maker-ba labaduba waxay ka bilowdaan guddi 0,1000% ah. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu yareyn karo khidmadahaas. Midka hore waa iyada oo la ganacsado in ka badan 50 Bitcoins 30 maalmood gudahood… mug ganacsi oo aan la heli karin. Haddii kale waxaad ku haysan kartaa wax ka badan 50 BNBs koontadaada si aad u yareyso Khidmadda Sameeyaha ee 0,0900%. 50 BNB, hadda, waa qiyaastii, 11.100, sidaa darteed weli waa wadarta guud.
Haddii aad rabto qiimo dhimis ku saabsan Khidmadaha Taker, waxaad u baahan doontaa inaad ku beddesho 4500 BTC 30 maalmood gudahood ama aad 1.000 BNB ku leedahay koontadaada. Yep, taasi waa in kabadan 220.000 oo ah crypto BNB. Immisa ayaa lacagtaas dhan dhinac iska dhigtaa?
Marka waxaan kula talinayaa waa had iyo jeer ku hayso qaar ka mid ah BNB koontadaada oo u isticmaal inaad ku bixiso khidmadaha ganacsiga. Samee taas, oo waxaad si otomaatig ah uga heli doontaa khidmadahaas 25% oo waxaad bixin doontaa oo keliya 0,0750%. iyo haa, waad badbaadin kartaa xitaa intaa in ka badan! Waa inaad isticmaashaa tani waa iskuxirahayga tixraacyada, oo waxaad ka heli kartaa 20% kale oo ka mid ah khidmadaha ganacsiga.
Markaa haddaad furaneyso xisaab cusub Binance hadda waxaad sameyn kartaa laba shay oo aad u fudud: iibso qaar ka mid ah BNB si aad ugu bixiso khidmadaha ganacsiga, oo iska qor adoo adeegsanaya xiriiriyahayga. Haddii aad sameyso, waxaad bilaabi kartaa ganacsiga weligiis dhimista guddiyada 40%, laga bilaabo 0,1000% ilaa 0,0600% kaliya.
Run ahaantii cidina kama hadasho waxyaabaha cajiibka ah dallacsiinta ku saabsan Binance laga helo bogga guriga.
Inta badan xayaysiisyadan waxaa loogu talagalay dhanka loo yaqaan 'crypto-junkies', kuwa aadaya ka fogaanshaha iyaga oo aan lahayn crypto. Laakiin wali waa mudan tahay inaad dhex marto oo aad aragto haddii midkoodna leeyahay qiime adiga dan kuu ah.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ka ganacsato REEF crypto, waxaa jiray tartan $ 50.000 REEF ah. In kasta oo abaalmarinnadani ay inta badan u socdaan jihada ganacsatada xooggan, haddana waxaa jira wax bakhtiyaa-nasiibka u ah dhiirrigelinno badan: tartankan ganacsi ee lala galayo REEF crypto, 20 qof oo nasiib badan oo ka ganacsan jiray REEF ayaa si aan kala sooc lahayn loogu doortay inay helaan 500 oo hadiyad ah. $ ee REEF. Iska tuur.
Waayahay, hadda waad ka ogtahay guddiyada iyo dallacsiinta. Aynu bilowno ka hadalka ganacsiga dhabta ah ee Binance.
Marka waxaa jira dhowr siyaabood oo looga ganacsado Binance. Waa maxay habka ugu fudud? Sidii caadiga ahayd, hubi inaad gasho akoonkaaga Binance, ka dibna riix Ganacsiga meesha ugu sarreysa miiska, oo xulo Beddel.
Waxaad iman doontaa shaashad aad ka dooran kartid cryptocurrencies aad rabto inaad beddesho oo aad doorato xaddiga aad rabto inaad ka ganacsato.
Aynu iska dhigno inaan dooneyno inaan ku iibino 1 ETH Bitcoin.
Kaliya gali adigoo gujinaya Beddelaadda Falanqeynta. Waxaad arki doontaa qiimaha qiimaha iyo fiiro gaar ah, waxaad leedahay dhowr ilbiriqsi in la aqbalo qiimahaas. Markaad dhamayso, waad dhammaysay ganacsiga. Aad u fudud.
Faa'iido darrida habkani waa in ay jiraan tiro kooban oo lamaane ganacsi ah oo ay kaliya taageerto amarrada suuqa, taas oo macnaheedu yahay inaad ku tiirsanaato sicirka suuqa xilligaas saxda ah.
Haddii aad rabto dabacsanaan badan, waxaad ka heli kartaa qaybta ganacsiga ee caadiga ah: baarka wareega ee dusha sare, Trading ka dibna Classic.
Kadib waxaad arki doontaa shaashad ganacsi oo sidan oo kale ah waxaana laga yaabaa inaad ka fekereysoNacalad Waan ogaa inay murugsan tahay". Tallaabo dib u qaado! Oo ha argagixin. Waxaan kuu ballan qaadayaa inaysan ahayn mid murugsan sida ay ugu muuqan karto jaleecada hore.
Faa'iidada adeegsiga noocan ah is-dhex galka ganacsiga ayaa ah inay kuu oggolaan karto inaad dhigato noocyo dalab oo horumarsan, kuwaasoo kaa badbaadin kara lacag badan iyo waqti badan.
Si loo fahmo waxa ku dhacaya isdhaafsiga ganacsigan aan u qaybinno qaybo.
Dalbo Buug, diiwaangelinta amarrada
Bidixda bidix waa Amarka Buugga, buugga amarka, Dhammaan lambarradaas gaduud ee sare waa iibinta amarro gaar ah oo loo yaqaan 'cryptocurrency' oo kuwa cagaaran dhammaantood waa amarro iibsi. Amaradaas oo dhan waxaa lagu sameeyaa qiime kala duwan. Sadarka bidix ee buugga amarka waa qiimaha ay dadku dhigteen iibsashada ama iibinta amarrada. Tiirka dhexe waa xaddiga loo yaqaan 'cryptocurrency' ee loo heli karo qiimaha iibka qaarkood, ugu dambayntiina waxaan ku haynaa safka saxda ah ee buugga amarka ah ee muujinaya qiimaha doollarka ee laga heli karo qiimaha qiimaha iibka kala duwan. Bartamaha shaashadda waxaad ku arki kartaa shaxda qiimaha.
Sifee dusha sare wakhti go'an
Waad ku shaandheyn kartaa iyadoo loo eegayo qaababka waqtiga kala duwan sidoo kale waxaad riixi kartaa fallaarta yar si aad u daawato qalabka shaxanka, haddii aad xiiseyneyso inaad sameyso falanqeyn farsamo. Inbadan ayaan ka hadli karnay .
Fur qalabka shaxda hoose
Midigta sare ee guddiga ganacsiga waxaad kuheleysaa dhammaan noocyada ganacsiga kaladuwan ee laga heli karo Binance. Shaqada raadinta waxaad kuheleysaa cryptocurrency aad rabto inaad ka ganacsato (ganacsi, Dadka ku hadla Ingriisiga waxay dhahaan). Hadda waxaan raadinayaa calaamadaha ADA, ee Cardano, iyo sida aad u aragto lamaanaha ganacsiga ee kala duwan ayaa soo baxaya. Waan ogahay, waxaad leedahay laba su'aalood.
Raadi calaamadda aad rabto inaad bilowdo ganacsiga
Marka hore, maxay heck u sameeyaan calaamadahaas 10x iyo 5x ama 3x ah ee loola jeedo kuwa ku xiga qaar ka mid ah kuwa ganacsiga ADA ah? Kaliya waxay ka dhigan yihiin inaad ku ganacsan karto ka faa'iideysiga toban ama shan ama saddex illaa iyada oo loo marayo Ganacsiga margin: taasi waa halka aad ka amaahato lacag si aad ugu ganacsato leverage, si aad u kordhiso dakhligaaga (iyo khasaaro).
Dhab ahaan, miyaad hadda bilaabaysaa? Iska dhaaf ganacsiga xawliga ah gebi ahaanba, u oggolow ganacsatada khibrada leh inay u adeegsadaan ama u bartaan inay noqdaan ganacsade khibrad leh oo aad si buuxda u fahmi karto halista.
Arrinta labaad ee aad u maleyneyso inay tahay sababta aan u raadiyay ADA halkii aan ka raadin lahaa Cardano. Xaqiiqdii, haddii aad tahay Czech Cardano, waxba ma soo baxaan. Sababta ayaa ah in lamaanaha ganacsiga ay adeegsadaan noocyo gaagaaban oo magacyada cryptocurrency ah, oo loo yaqaan 'tickers'. Caadi ahaan waa isku darka saddex ama afar xaraf. Iyo sidee ku heleysaa calaamadeeyaha loo yaqaan 'crypto' ee aad rabto inaad iibsato? Tag bogga'marketmarketcap 'oo ka raadso crypto aad xiiseyneyso. Ticker ayaa ka soo muuqan doona midigta magaca cryptocurrency.
Sidaas ayaad kuheli kartaa sicirka sicir bararka kasta ee loo yaqaan 'cryptocurrency'. Aynu dib ugu noqonno guddigaas ganacsiga.
Ganacsiyada Suuqa, isweydaarsiga suuqa
Qeybta midig ee hoose waxaad ku leedahay Ganacsiyada Suuqa, yacni meheradaha suuqa. Kaliya ganacsiyada ugu dambeeyay ee la sameeyay ayaa la muujiyay.
Ugu dambeyntiina, waxaad leedahay qaybta guddiga ganacsiga halkaas oo dhammaan sixirku dhaco iyo meesha aad gasho dhammaan amarrada muhiimka ah.
Sida caadiga ah liiskan amarka waxaa loo dejin doonaa Xaddid Amarada. Habka ugu wanaagsan ee lagu sharxi karo waxa ay yihiin waa in la adeegsado tusaale: aan dhahno taasi fikirkaaga ah qiimaha Bitcoin hadda waa mid aad u sarreeya, waadna ku farxi lahayd inaad iibsato markii ay ku soo noqoto 40.000. Waxaad ku dhejin kartaa amarkan Binance - waa inaad ku qortaa qiimahaas 40.000 oo aad doorataa qadarka Bitcoin aad rabto inaad iibsato. Adiga oo riixaya badhanka iibsiga cagaaran amarkaas ayaa lagu dari doonaa diiwaanka amarka. Haddii aad hurudeyso habeen dambe oo qiimaha BTC uu hoos ugu dhaco 40.000 oo ah Binance, markaa amarkan xadidan ayaa si otomaatig ah u kicin doona waxaadna ku heli doontaa BTC-kaaga qiimaha ugu hooseeya.
Ma fahantay sida amarrada xaddidan loogu adeegsado ganacsiga crypto? Waxaa laga yaabaa inay mudan tahay in la isticmaalo Amarada Xaddidan halkii aad ka ahaan lahayd Amarada Suuqa.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado in amarrada xaddidan ay u isticmaalaan Kharashka Sameeyayaasha guddi ahaan, oo aysan u isticmaalin Khidmadaha Taker, taas oo mararka qaarkood ka jaban Binance. Amarada xaddidan waxay u shaqeeyaan si isku mid ah dhinaca iibka: Waxaan dalban karaa amar xaddidan hal bitcoin haddii qiimaha uu gaaro 100k - amarkaas ayaa halkaas sii joogaya oo aan waxba qaban doonin illaa inta qiimaha laga gaarayo.
Sida iska cad, amarradan marwalba waa la burin karaa. Waxa kale oo aad dejin kartaa in amarku ahaado mid firfircoon oo keliya wakhti cayiman laakiin kani waa a mowduuc loogu talagalay maqaal kale
Amarada Suuqa waa noocyada ugu fudud ee dalabka: waxaad si fudud u geleysaa qaddarka aad rabto inaad iibsato oo aad qaadatid sicirka suuqa marka aad dalbaneyso amarka.
Waxa kaliya ee aynaan ka hadlin waa Joojinta Amarada, si fiican uma sharixi karo.
Laakiin haddii aad taxaddar laheyd, waa inaad hadda ogaataa aasaaska sida loo iibsado loona iibiyo cryptocurrency iyadoo la adeegsanayo Amarada Suuqa iyo Amarada Xaddidan. Waxaa jira wax kale oo laga fogaado: Mustaqbalka.
Derivatives - Mustaqbalka
Xitaa way ka khatar badan tahay Margin Trading. Mustaqbalka wuxuu noqon karaa aalad waxtar leh marka ay si masuuliyadi ku jirto u adeegsadaan ganacsatada xirfadleyda ah, laakiin kuwa cusub ee sidaada oo kale ah ee doonaya inay ku ganacsadaan altcoyin kacsan oo leh lexleysiga 125x… ma ahan dad mas'uul ah. Haddii aad ku adkeysato inaad ku ganacsanaysid leverage, markaa waxaad tixgelin kartaa Leveraged Tokens, oo ku siinaya ka faa'iideysi dhexdhexaad ah isla markaana baabi'inaya khatarta ah in lagaa shubo .. sidaa darteed ganacsi wanaagsan. Waa inaan ka hadalno tan sidoo kale berri.
Waxaan ku aragnay shaqeynta ganacsiga aasaasiga ah ee Binance.
Si kastaba ha noqotee tani waa mid ka mid ah adeegyada badan ee lagu bixiyo buukhtan ballaaran ee loo yaqaan 'cryptocurrency buffet', marka aan eegno waxa kale ee ku jira liiska.
Iyada oo wareegtadan oo dhan lagu daabacayo waraaqo cusub oo adduunka oo dhan ah, adiguba waxaad leedahay xiisaha qosolka ah ee lacagahaaga. Hagaag, Binance Earn wuxuu ku siinayaa awood aad ku kasbato dulsaarka kudhowaad 6% APY (Waxsoosaarka boqolkiiba sanadlaha) qaar ka mid ah lacagaha loo yaqaan 'crypto'.
Shaqada Binance - Shuruudaha Dabacsan
Waad dooran kartaa inaad doorato keyd jilicsan, taas oo macnaheedu yahay inaad heli karto crypto-kaaga waqti kasta, ama waad xannibi kartaa koodhkaas muddo ah illaa 90 maalmood si aad u hesho dulsaar xoogaa ka sarreeya.
Shaqada Binance - Shuruudaha Go'an
Alaabada keydka ee halista sare leh ayaa loo heli karaa xitaa qiimayaasha sare, laakiin maskaxda ku hay inaad qatar badan uureyso inaad hesho dib u soo noqosho badan.
Shaqada Binance - Waxyaabaha Khatarta Sare leh
Sababta ay alaabooyinkan dulsaarka dhalinayaan ay caan u yihiin ayaa ah in dad badani ay sheygooda ku keydsadaan boorsada jeebka oo ay halkaas fariistaan ​​iyagoo aan waxba qaban. Taa baddalkeeda, dadka kale waxay qaataan qayb ka mid ah hantidooda si ay u kasbadaan dulsaar inta ay sugayaan qiimaha loo yaqaan 'cryptocurrency' inay qarxaan oo ay ku dhuftaan qiimaha ay doonayaan.
Badeecad kale oo kulul oo Binance ay bixiso waa kaarkooda fiisada crypto.
Binance Visa Crypto Debit Card
Laakiin maxaad ugu baahan tahay dhulka?
Aynu wajahno, beddelidda lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' iyo ka bixitaanka lacagtaas bangigaaga waxay noqon kartaa dhib. Sidoo kale, waa qabow inaad ka fikirto inaad wax siiso naftaada, haddii aysan xumaan u soo marin .. markaa haddii aad daryeesho oo aad rabto inaad awood u yeelato inaad ku bixiso meydkaaga meel kasta oo Visa laga aqbalo, kaarka Crypto waa waxa aad u baahan tahay. Kaarka waxaa laga heli karaa tiro badan oo adduunka ah. Kaarkaas quruxda badan ee Binance gabi ahaanba waa bilaash, Binance laftiisuna wax lacag ah kaaagama qaadi doono waxqabadka ama khidmadda maamulka. Kaarkaasi wuxuu sidoo kale ku xiraa koontadaada Binance Exchange! Iyo sidoo kale, waxaad heli kartaa lacag celin 8% ah markaad isticmaasho kaarkaas haa haa, haddii aad nasiib u yeelatay inaad hesho kaarka binance markaa waxaad ubaahantahay inaad hada qabsato.
Kuma talinayo inaad sidan sameyso, laakiin Binance sidoo kale wuxuu bixiyaa amaahda loo yaqaan 'crypto collateralized' haddii aad rabto.
Habka ugu toosan ee lagu tilmaami karo waa in ay la mid tahay sida amaah looga helo pawnshop, halkaas oo aad ku siiso dammaanad qaab shay qiime leh (sida saacad) oo aad lacag ka hesho amaah. On Binance waxaad ka heli kartaa Deyn bilow ah oo qiimo leh (LTV) oo ah 55% waxaana lagaa codsan doonaa inaad ku darto cryptocurrencies dheeraad ah si aad u sugto amaahda haddii LTV uu gaaro 75%. Haddii LTV ku dhaco 83%, dammaanaddaada crypto waxaa iibin doona Binance si loo daboolo amaahda .. xaqiiqdii ma doonaysid inay taasi dhacdo.
Waxa dadka intooda ugu badan ay ku sameeyaan amaahdan ayaa ah inay iibsadaan waxyaalo dheeri ah oo loo yaqaan 'cryptocurrencies' taas oo ah nooc ka mid ah ka faa'iideysiga, laakiin si kastaba ha noqotee, haddii aad xiiseyneyso, qalabkan waxaad ku bixin kartaa lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo xitaa waad amaahan kartaa pounds euro ama US dollars.
Kadib waxaa jira muuqaal loo yaqaan 'Binance Liquid Swap' oo ah hab kale oo aad ku abuuri karto dakhli aan macquul ahayn oo leh cryptocurrencies oo suurtagal ah inaad kasbato soo celin sare. Weli maskaxda ku hay in ay haliso wadato!
Isweydaarsiga Liance Liance
Muuqaal kale oo ay bixiso Binance waa Launchpool. Asal ahaan badeecadani waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha Biannce inay abuuraan astaamo ahaan abaalmarin ahaan loogu beddelo qaadashada lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' qaarkood. Qaar ka mid ah cryptocurrencies sida Litentry weligood ma helin iib dadweyne ama Bixinta Isweydaarsiga Bilowga ah gabi ahaanba, taas beddelkeedana waxay u qaybiyeen qayb ka mid ah calaamadda ugu horreysa adoo adeegsanaya Launchpool.
Badeecada ugu dambeysa ee aan rabo inaan kaala hadlo waa Binance Launchpad: waa barta gaarka ah ee Binance ee lagu bilaabayo mashaariicda crypto.
Sidoo kale waa halka ragga sidayada oo kale ah ay ku heli karaan qoondaynta calaamadaha qiimo aad iyo aad u wanaagsan. Binance, tikidhada bakhtiyaa nasiibka badan ee aad hesho. Haddii aad ku guuleysato bakhtiyaanasiibka, waxaad xaq u leedahay inaad ku iibsato altcoin gaar ah qiimo go'an. Marka, haddii aad dooratid mashruuc adag oo aad nasiib u leedahay inaad hesho qoondayn, waxaad u badan tahay inaad ku fiicnaan doontid sida ugu dhakhsaha badan marka ganacsiga dadweynaha uu si toos ah ugu noolaado Binance. Tani waa sababta ku dhowaad dhammaan mashaariicdii lagu bilaabay barnaamijka loo yaqaan 'launpadpad' ay si isdaba joog ah ugu qoreen dad aad u tiro badan, waana sababtaas sababta nidaamka bakhtiyaanasiibka loo hirgeliyey: waxay ahayd isku day binance ah in qoondayntani ka dhigto mid caddaalad iyo caddaalad ah. Sidoo kale maahan in haddii binance uu la wadaago waxyaabahan Bilowga ah ee Bixinta Is-dhaafsiga kale, markaa haddii aad ku aragto mashruuc ku saabsan baafiska daahfurka fursaddaasi waxay gaar u noqon doontaa Binance. Waa u qalantaa in lagu dul duubo suufka la furayo si loo arko haddii wax uun ka xanaajinayaan ...
Waxaan u dhow nahay. Kaliya dhowr eray oo dheeraad ah oo looga hadlo qaar ka mid ah ilaha waxbarasho ee Binance ay ku bixiso bilaash.
Midka hore waa Binance Academy, oo bixisa xoogaa ilo waali ah oo ku saabsan cryptocurrencies kala duwan iyo mowduucyo la xiriira cryptocurrencies Midda labaad waa wax aad loo dhayalsaday: waa Cilmi baaris. Halkan waxaad ka heli kartaa ilo laxiriira mashaariic leh noocyakastoo tirakoob iyo jaantusyo ah, oo kahadlaya liistada bixinta calaamadaha mashruuc la siiyay, qoondaynta calaamadda taasi waa qaybintooda, jadwalka sii deynta qaybinta iyo waxyaabo kaloo badan. Fiiri, waa wax fudud in la akhriyo.
Tilmaamuhu wuu dhammaaday ... laakiin runtu waxay tahay inaan hadda dusha ka xoqay oo Binance uu bixinayo wax aad u badan oo ay ku sheegi karto hal maqaal.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ku bilowdo Binance, ha iloobin qiimaha gaarka ah ee 20% qiimo dhimista ganacsiga adoo iska diiwaangelinaya bilaash adoo adeegsanaya xiriirka tixraaca.
Maqaalka xigtaSida loo soo saaro beerashada leh Liquid Swap on Binance